स्थानीय तहको निर्वाचन : सुरक्षामा झन्डै ६ अर्ब खर्च! - Kantipath.com
स्थानीय तहको निर्वाचन : सुरक्षामा झन्डै ६ अर्ब खर्च!
स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न करिब ४० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी भएको छ। निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघि म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारीमा गृह मन्त्रालय जुटेको छ।
निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरेर यसबारे अन्तिम निर्णय लिइने गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले जानकारी दिए। यो खबर हामीले आजको नयाँ पत्रिकाबाट लिएका हौ। निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धमा केन्द्रित पछिल्ला बैठकमा म्यादी प्रहरीको संख्या, छनोट विधि र आवश्यक बजेटबारे छलफल भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
गृहले निर्वाचन सुरक्षाका लागि पाँचदेखि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ। म्यादी प्रहरी भर्नाको अधिकार भने नेपाल प्रहरीलाई दिने तयारी गृह मन्त्रालयको छ। भर्नासम्बन्धी कार्यविधि भने गृहले नै बनाउनेछ। बुथका आधारमा म्यादी प्रहरी संख्या गृह मन्त्रालयका निमित्त सचिव केदार न्यौपानेले बुथका आधारमा म्यादी प्रहरीको अन्तिम टुंगो लाग्न बताए। ‘स्थानीय तहको नयाँ प्रतिवेदन र त्यसअनुसार हुने स्थानीय तह र निर्वाचन बुथका आधारमा संख्या थपघट हुन सक्छ,’ न्यौपानेले भने।
म्यादीमा पूर्वसुरक्षाकर्मीलाई प्राथमिकता गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्दा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र जनपद प्रहरीबाट सेवानिवृत्त भएकालाई पहिलो प्राथमिकता दिइनेछ।
दोस्रो प्राथमिकतामा भने यसअघि विभिन्न निर्वाचनमा म्यादी प्रहरीमा रहेकालाई राखिने भएको छ। झन्डै दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबै सुरक्षा निकाय र म्यादीसहित गरी करिब दुई लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने गृह मन्त्रालयको अनुमान छ। गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका सबै युनिट निर्वाचनमा परिचालन हुने जानकारी दिए। हाल नेपाल प्रहरीमा ७२ हजार र सशस्त्र प्रहरीमा ३६ हजार सुरक्षाकर्मी छन्।
Previous Previous post: ३३ किलो सुन प्रकरण : तस्करलाई मात्रै सोधेर विदामा बस्थे कर्मचारी
Next Next post: Over Rs 101 million commitments received from religious event in Pokhara
‘त्यो प्रदैन’ शपथका विरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
सिंहदरबारमा ओली र नेपाल बीचवार्ता शुरु
कोरोना संक्रमणबाट वरिष्ठ ग्यास्ट्रो बिज्ञ आचार्यको निधन
आईएनजीओमाथि गुप्तचरको निगरानी, सुरुङमार्गको युग शुरु
प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्- भारतसँग समन्वय गरी बाँध खुलाउने काम भैरहेकाे छ
काँग्रेसमा गुटगत ध्रुवीकरण बढ्दै, बहुमतको निर्णय सच्याउन माग
राजदूत प्याकुरेलको राजीनामा : स्वार्थी कर्मचारीको टेवलमा परराष्ट्र नीति
ललितपुरको लुभुमा एकै घरका १० जनामा कोरोना संक्रमण